Mamishinari Anoparadzira Shoko raMwari | Nhoroondo yeIndonesia
Ungano yeSurabaya muna 1954
Muna July 1951, vanhu vemuungano diki yaiva muJakarta vakaungana kuti vagamuchire Peter Vanderhaegen, mumishinari wekuGiriyedhi uyo aiva wekutanga kupinda muIndonesia. Pakazopera gore, kwakanga kwasvika mamwe mamishinari 13 achibva kuAustralia, Germany, uye Netherlands, zvichiita kuti nhamba yevaparidzi vaiva munyika ipetwe nekanenge kaviri.
“Ndaifungidzira kuti ndichaenda paimba neimba, ndotaura nevanhu ndichishandisa maoko,” akadaro Fredrika Renskers, mumishinari akabva kuNetherlands. “Asi, sezvo vanhu vakawanda chaizvo vaitaura chiDutch, pakutanga ndainyanya kuparidza mumutauro iwoyo.” Ronald Jacka, akabva kuAustralia, akati: “Vamwe vedu taishandisa makadhi ekupupurira aiva nemharidzo pfupi yakanga yakanyorwa muchiIndonesian. Ndaiverenga kadhi racho ndisati ndagogodza pasuo rimwe nerimwe uye ndoedza kutaura mashoko acho nemusoro.”
Mamishinari aishanda nesimba chaizvo pabasa rekuparidza zvekuti mugore rimwe chete, nhamba yevaparidzi yakanga yatowedzera kubva pa34 kuenda ku91. Musi wa1 September 1951, hofisi yebazi reWatch Tower Society yakavhurwa pamba paAndré Elias muCentral Jakarta. Ronald Jacka ndiye akanzi ashande semuranda webazi.
Basa Rinotanga Mune Dzimwe Nzvimbo
Muna November 1951, Peter Vanderhaegen akatumirwa kuManado, North Sulawesi, kwaiva neboka diki rainge ratangwa naTheo Ratu nemudzimai wake. Vanhu vakawanda vaigara ikoko vaizviti vaKristu uye vairemekedza chaizvo Shoko raMwari. Vanhu vakawanda vaiti Zvapupu zvipinde mumba, vokumbira kutsanangurirwa dzidziso dzeBhaibheri. Zvapupu zvaiwanzokurukura nemapoka evanhu gumi. Paizopera maminitsi 15, painge patova nevanhu vaiteerera vanenge 50. Awa isati yapera, vaitozopedzisira vava kukurukura nevanhu vanosvika 200 vari pachivanze.
Gore ra1952 richangotanga, Albert naJean Maltby vakavhura imba yemamishinari muSurabaya, guta rechipiri pakukura muIndonesia riri kuEast Java. Ikoko, dzimwe hanzvadzi 6 dzaiva mamishinari dzakabatana navo, dzaiti: Gertrud Ott, Fredrika Renskers, Susie naMarian Stoove, Eveline Platte, uye Mimi Harp. “Vanhu vakawanda veko vaiva maMuslim asi vakanga vasina kunyura muchitendero chavo zvakanyanya uye vaiva neushamwari chaizvo,” anodaro Fredrika Renskers. “Zvaiita sekuti vanhu vakawanda vainge vakatomirira chokwadi, uye zvaiva nyore kutanga zvidzidzo zveBhaibheri. Pasina makore matatu, ungano yeSurabaya yakanga yava nevaparidzi 75.”
Imba yemamishinari muJakarta
Panenge panguva iyoyo, mumwe murume muMuslim ainzi Azis aibva kuPadang, West Sumatra, akanyorera hofisi yebazi achikumbira kubatsirwa pakunamata. Azis akanga adzidza Bhaibheri nemamwe mapiyona ekuAustralia makore ekuma1930, asi haana kuzoramba achionana nawo nyika yavo payakanga yava kutongwa neJapan. Akabva angowanawo kamwe kabhuku kakabudiswa neZvapupu zvaJehovha. Akanyora kuti: “Pandakaona kero yekuJakarta pakabhuku ikako, zvakabva zvandipa tariro yekuti ndichadzidza zvakare neZvapupu!” Hofisi yebazi yakakurumidza kutumira mutariri wedunhu ainzi Frans van Vliet kuPadang. Asvika ikoko akaona kuti Azis akanga atombotaura nemuvakidzani wake, Nazar Ris, uyo aishanda muhurumende uye aiva nenzara yekuziva chokwadi. Varume ava nemhuri dzavo vakagamuchira chokwadi. Hama Azis vakazova mukuru akatendeka. Nazar Ris akazova piyona chaiye, uye vakawanda vevana vake iye zvino vava Zvapupu zvinoshingaira.
Frans van Vliet nehanzvadzi yake Nel
Achangobva ikoko, Frans van Vliet akabva ashanyira imwe hama yekuNetherlands yakanga yaneta pakunamata iyo yaivaka nzvimbo inoitwa zveoiri yakanga yadhirika muhondo muBalikpapan, East Kalimantan. Frans akaenda nehama yacho muushumiri uye akamukurudzira kuti adzidze nevanhu vakati kuti vaifarira. Payakazodzokera kuNetherlands, hama yacho yakanga yatotanga boka diki muBalikpapan.
Papera nguva, imwe hanzvadzi yakanga ichangobva kubhabhatidzwa yainzi Titi Koetin, yakatamira kuBanjarmasin, South Kalimantan. Titi akaparidzira hama dzake dzechiDayak uye akabatsira vakawanda vavo kuti vadzidze chokwadi. Vamwe vacho vakadzokera kumisha yavo mukati kati meKalimantan uye vakatanga mapoka akazova ungano dzakasimba.
Kubudisa Mabhuku muchiIndonesian
Sezvo basa rekuparidza raiwedzera nekukurumidza, pakanga pava kudiwa mamwe mabhuku akawanda muchiIndonesian. Muna 1951, bhuku rinonzi “Mwari Ngaave Wazwokwadi” rakashandurirwa muchiIndosesian, asi hurumende yakachinja manyorerwo aiitwa mutauro wacho, saka bazi raifanira kudzokorora shanduro yebhuku racho. * Bhuku racho parakazobudiswa, rakaita kuti vanhu vakawanda vaiverenga mabhuku echiIndonesian vafarire.
Muna 1953, hofisi yebazi yakaprinda magazini 250 eNharireyomurindi mumutauro wechiIndonesian. Aka kaiva kekutanga kuiwana zvakare mumutauro uyu pashure pemakore 12. Magazini yacho yaiva nemapeji 12 uye yaiprindwa nemuchina wakaita setapureta (mimeograph). Pakutanga yaingova nenyaya dzekudzidza chete. Pashure pemakore matatu, yakawedzerwa kuti ive nemapeji 16, uye imwe kambani yaiprinda makopi 10 000 emagazini yacho mwedzi nemwedzi.
Mukai! yakatanga kubudiswa muchiIndonesian muna 1957 uye yaibudiswa mwedzi nemwedzi. Pasina nguva yakanga yava kutoprindwa makopi 10 000. Hama dzaifanira kukumbira rezinesi rebepa raishandiswa pakuprinda nekuti bepa racho rainge rava kunetsa kuwana munyika yese. Mumiririri wehurumende aiongorora chikumbiro chavo akavaudza kuti: “Ndinoona sekuti Menara Pengawal (Nharireyomurindi) ndiyo imwe yemagazini dzakanakisisa muIndonesia uye ndinoda chaizvo kukubatsirai kuti muwane rezinesi, kuitira magazini yenyu itsva.”
^ ndima 1 Kubva muna 1945, manyorerwo anoitwa chiIndonesian akachinjwa zvikuru kaviri zvichinyanya kuitirwa kutsiva manyorero echiDutch.
Indonesia: Mamishinari ekuGiriyedhi Anosvika